Home News Halkee ku Dambeeyeen Ciidamadii lasoo Tubay Wadooyinka Muqdisho,Hal Askari oo Jid-walbo la...
Halkee ku Dambeeyeen Ciidamadii lasoo Tubay Wadooyinka Muqdisho,Hal Askari oo Jid-walbo la istaajiyay
Waxaa maalmihii danbe wadooyinka waaweeyn ee magaalada muqdisho lagu arkayay in ay ku sugan yihiin askar katirsan ciidanka dowladda kuwaasi oo baaraya gawaarida maraysa halkaasi.
Dhoowrkii maalmoood ee u danbeeyay ayaa waxaa muuqatay in kaliya si teel teel ah ay laamiyada ay ugu sugan yihiin ciidamada taasi oo keentay in shacabka ay su’aal ay iska weeydiiyaan oo ah halka ay ku danbeeyaan ciidamadii ay dowladda ay soo dhigtay wadooyinka muqdisho.
Madaxda dowladda ayaa lagu eedeeyay iney waajib iska saarin amaanka caasimada oo haatan ku jirta waqti aad u adag maadaama ay maalin waliba ka dhacaan falal amaan daro.
Sikastaba ha ahaatee arrintani ayaa ku aadeysa xilli wadooyinka muhiimka ah ee muqdisho lagu dilo dad isugu jira shacab, masuuliyiin ,iyo ciidamo taasi oo keentay inla isweeydiiyo halka ay ka baxeen ciidankii loogu talagalay iney xaqiijiyaan amaanka magaalada muqdisho.
Previous articleQarax lala beegsaday Ciidamo Talyaani ah oo ka dhacay Muqdisho
Next articleMaxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo Xukuno kala Duwan ku riday Rag Shabaabnimo lagu Eedeeyay!!
Gudoomiye Ku xigeenkii Gudiga Doorashooyinka’’waxyaabo aan la aqbali karin ayaa ka...
K/Galbeed oo mas’uul u magacaawday deegaan Al-shabaab gacanta ku heeyso